Hery - Tsiky dia ampy | Oktobra 2006 |
Vita ny player vaovao fihainoana ny Radiovazogasy
2006-10-24 @ 15:17 in Blaogy Dev
Vita indray izany izao ny player izay fihainoana ny Radiovazogasy.com. Tsy dia mahay flash loatra aho (tsy mahay mihitsy) fa dia izay hita no natambatambatra tao.
Azon'ny rehetra apetraka amin'ny site-ny ny player. Apetrako eto ambany eto dia jereo ny sources
&amp;lt;a href='http://radiovazogasy.com/player/' target='_blank'&amp;gt;Cliquer ici&amp;lt;/a&amp;gt;
SAMGraph: Mampiseho antsary ny isan'ny mpihaino
2006-10-20 @ 22:44 in Blaogy Dev
Fitaovana iray namboarina izay mampiseho ny isan'ny mpihaino amin'ny Radio mampiasa SAM.
Jereo eto: SAMgraph
Toa izao ohatra ny mpihaino ao amin'ny Radiovazogasy
Karabot: fampiharana ny NET_Smartirc
2006-10-19 @ 16:11 in Blaogy Dev
Nivoaka androany ny release voalohan'ny Karabot... "Beta release" ary efa manomboka sahady manova azy aho.
Ny Karabot dia robot izay miasa sy mamaly ao anatin'ny chat IRC anakiray. Efa nikirakira eggdrop aho vao nanapakevitra ny hanoratra an'io robot io amin'ny alalan'ny PHP (mampiasa cli). Net_SmartIRC izay ao anatin'ny PEAR no nampiasaina hifandray amin'ny serveur.
Matanjaka tsara ilay bot ary tsy atahorana aloha hatramin'izao. Efa mipetraka ao amin'ny karajia.org mantsy izy io ary BotLives01 no anarany ao. Ny zavatra ataony ao amin'ny karajia.org amin'izao fotoana izao dia
- Mamaly ny baiko madinika mahazatra ny ankizy mpikarajia (Fun)
- Mamaly ny baiko momba ny radiovazogasy. Izany hoe mampiseho ny hira mandeha, mitady hira, mandahatra hira ary mametraka hafatra.
- Misy koa ny baiko hafa izay ataon'ny administrateurs.
Ny mbola hatao
Hampidirana baiko vitsivitsy:
- Mamaky hafatra
- Mamaky forum
- Mamaky gazety RSS
- Mandefa email